Miisaaniyaddii sannadka oo la soo bandhigey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Miisaaniyaddii sannadka oo la soo bandhigey
La daabacay torsdag 20 september 2007 kl 15.35
Qeyb ka mid ah barnaamijkii maalintii Arbacada ee bishuna aheyd 19-ka, ka baxey idaacadda Codka
ayaad ku maqasheen sannadguuradii koowaad, kolkii dawladda maamulka dalka ey u suurtagashey iney awoodda kala wareegto xisbigii Socialdemokrat-ka. Sidoo kale waxaa isla maalintii Arbacada albaabka loo furey kulan sannadeedkii xubnaha baarlamanka, islamarkaana goobtaasi uu ku soo bandhigey Fredrik Reinfield dhabada siyaasadda ee dawladdiisa.
Haddaba Khamiista bishuna tahey 20, ayuu wasiirka dhaqaalaha, Anders Borg ee dawladda Reinfield, uu markii ugu horreysey soo bandhigey miisaaniyaddii sannadka foodda innagu soo haya. Markii ugu horreysey maadaama ey sannadka 2007-da miisaaniyaddii lagu shaqeynayey ey horrey u dejiyeen dawladdii midan ka horreysey, uuna madaxda ka ahaa Göran Persson.
- Ma jirto dawlad, mudda sidaa u yar ku qabatey howlo sidaa u baaxad leh, in la muujiyo qiimaha shaqada, in shirkaduhu wax shaqaaleeyaan iyo iney noqoto wax soo jiita furitaanka shirkado mulki loo leeyahey. Sida uu sheegey Anders Borg, mar uu ka hadlayey soo bandhigiisii miisaaniyadda.
Dhaqaalaha dalka ayaa maraya heer aad u sarreeya. Kobaca dhaqaalaha dalkan Iswiidhen ayaa sida la saadaalineyo kor u dhaafaya inta ka horreeysa sannadka 2010-ka, 100 Miljaard oo kornka Iwiidhishka ah, islamarkaana hoos u dhacayaan deymihii dalka lagu lahaa.
Dowladda maamulka faraha ku heysa ayaa goolka ugu horreeya ka dhigatey sidii loo kordhin lahaa shaqa abuurka, lana fileyo illaa iyo 200 000 inta ka horreysa sannadka 2010.
Cashuurta mushaarooyinka oo la dhimo, tan shidaalka, tubaakada, khamriga oo kor loo qaado, ayaa lagu miisaaniyad gelin doonaa arrinka la xiriira dhimidda qidmadda Mushaarka. Hase yeeshee dhaqaalaha ugu weyni waxaa laga helayaa in la dhimo dhaqaalaha iyo mushaarooyinka ku baxa dadyoowga xanuunsan iyo shaqa laawayaasha.
Waana fikir la xiriira in la kala caddeeyo qiimaha shaqada iyo shaqa la’aanta
- Waa tallaabooyin ey dadka qaarkii u fasiran karaan kuwo aad u adag, hase yeeshee waa xilliga dhaqaaluhu heerka sare mareyo, kolka loo baahan yahey in masuuliyad weyn leysa saaro, islamarkaana aan horey loo gelin qaladaadkii dhaqaalaha ee horey u dhacey.
Dooddii xigtey ee ka dhacdey xarunta baarlamanka, ayey doodo kul kulul is dhaafsadeen Anders Borg, wasiirka dhaqaalaha iyo Per Nuder, afhayeenka xisbiga Socialdemokratka.
- Warku wuu cadyahey. Dariiqii ayaa sidiisii loogu socon doonaa. Waxaa la dhimayaa cashuurta, iyadoona lagu miisaaniyad gelin doono dhimmiddaa in laga jaro dadyoowga ugu tabarta daran iminkaba. Sida uu sheegey Per Nuder oo ka hadlayey miisaaniyadda uu soo bandhigey Anders Borg.
- Waa siyaasad la xiriirta shaqa abuur iyo sidoo kale xoriyadda. Kol haddii cashuurta la dhimo. Kolka cashuurta laga yareeyo mushaaradda, wuxuu shakhsigu heleyaa dhaqaale dheeraad ah una sahlaya xoriyadda kala doorashada, ayuu ugu war celiyey Anders Borg dhaleeceyntii uga soo yeertey Per Nuder, afhayeenka dhaqaalaha ee xisbiga Socialdemokrat-ka.
Miisaaniyadda sannadka ee uu soo bandhigey waxiirka dhaqaalaha Anders Borg, waxyaabaha ku jira in hoos loo dhigo lana gaarsiiyo 75%, dhaqaalaha ey qaataan dadyoowga jiro ku qoran wixii loo gaaro hal sano, middaasina oo dawladdu uga gol leedahey sidii dadka loogu dhiirigelin lahaa iney howlgalaan.
Madax ururka shaqaalaha ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan TCO Store Nord, ayaa sheegey in tallaabadani tahey mid qaldan.
- Shakhsiga oo dhaqaalaha lagu ciriiriyo u noqon meyso sabab inuu si dhakhso leh ku howl galo.
Balse waxey dawladdu amuurtan ku jabineysaa heshiiskii ey ururrada shaqaaluhu la galeen xubnahooda, mar haddii sharci amuurtaa laga soo saarey. Sore Nord, madaxa ururka shaqaalaha ee TCO.
Waxaa jira heshiisyo ey ururrada shaqaaluhu la galeen shaqabixiyeyaasha, midkaasina oo kolka ruuxu xanuunsado bixiya mushaar ey ku kabayaan kan ka soo gala heyadda ceymiska ee Försäkrings kassan.
Sarkaaladda magaceeda la yiraahdo Bettina Kashefi, ee ka howlgasha wasaaradda dhaqaalaha ayaa sheegtey in tallaabadn looga gol leeyahey sidii loogu dhiirigelin lahaa ruuxa suurtagal shaqa-doonasho.
Waxyaabaha kaleeto ee ku cusub miisaaniyadda uu Khamiistii soo bandhigey wasiirka dhaqaaluha Anders Borg, waxaa ka mid ah in laba maalmood lagu daro, maalmaha lagu magacaabo Karensdagar, ama aannu shakhsigu lacag ku laheyn heyadda A-kassa kolka ey ruuxa la soo gudboonaato shaqa la’aan.
Iyo sidoo kale tallaabo la xiriirta dadyoowga haya howl aan buuxin, ama waxa afkan iswiidhishka lagu yiraahdo Deltidsarbetslösa, kuwaasina oo halkii ey dhaqaalaha ka dhiman u buuxin jirtey heyadda shaqa la’aanta ee A-kassa, horeyna uu suurtagal u lahaa sannooyin inuu middaa ku helo, laakiinse hadda laga dhigey wixii ka dambeeya bilowga sannadka foodda innagu soo haya ugu badnaan 75 maalmood, cidda keliya ee aaney ee aaney qabaneyn waa ciddii leh dhallaan da’doodu ka yartahey 18 sannadood, kuwaasina oo la siiyey 450 maalmood.
Ella Nia, waa madaxa urrka shaqaalaha ee Hoteellada iyo goobaha lagu cunteeyo.
- Haddii aan eegno ururkan aan metalo, waxaa jirta iney xubno ka yahiin shaqaale fara badan ee haya shaqooyin aan buuxin. Weligeyna ima soo marin cid ku faraxsan iney hayaan shaqooyyin aan buuxin oo aaney dantu ku kalifin. Taasina waxey aheyd Ella Nia, madaxa ururka ee shaqaalaha Hoteellada iyo goobaha lagu cunteeyo.